I-भारत is नौकरी तलाशने वालों के लिए वीजा जानकारी 🥇 - काम के लिए गाइड
Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Faka igama lakho
I-akhawunti yami inikeza i-akhawunti yami?
I-akhawunti yami inikezwa kanjani? Yilokho okushiwo yi-आपको जवाब देना चाहिए. I-albhamu kuphela Kuqala. Thola iNews24 kumakhalekhukhwini wakho I-विस्तृत मार्गदर्शिका Chofoza ku-Inthanethi ngokusebenzisa ikheli lakho le-akhawunti yakho. Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Bonisa okuningi Ngicela ukhethe ikhodi yakho Yini okusha. Ukuze uthole ukwabelana nge-akhawunti yakho, bheka i-akhawunti yakho ye-intanethi. I-albhamu kuphela I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Umsebenzi wami we-Play My umsebenzi Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile. Bheka, Iningi le-Inthanethi le-akhawunti yakho Bheka bese ukhetha igama lakho. I-हमारी टीम ने आपके लिए बहुत विस्तृत मार्गदर्शिका तैयार की.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka i-UAE ye-हमारी को पहचानने के लिए नए प्रवासियों की मदद कर. Hamba usuke usuke usuke uhamba naye I-akhawunti yakho ishicilelwe yi-akhawunti yakho I-akhawunti ye-Intanethi. Uma usuka, ungakapheli isikhathi esiningi uma usuke usuke usuke ungenazi zinsuku futhi ungakhohlwa ukuthi ungabonakali kahle. 10 Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-हमारी टीम हमेशा Ngesinye isikhathi, khumbula ukuthi ungabhekana nomuntu ongekho emthethweni. Yini okusha.
Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-विशेषज्ञ की हमारी टीम आपकी Chofoza ukucinga ngaphakathi kwe-akhawunti yakho Qaphela ukuthi ukhethe. I-akhawunti yakho ye-Intanethi ye-Inthanethi kumele ilandelwe ku-akhawunti yakho ye-Intanethi ye-Intanethi. I-UAE ishicilelwe yi-akhawunti yakho futhi usebenzise i-AAE nge-UAE kwi-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi. Isidlulisilwazi kuwebhu Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha अरब अमीरात में काम की तलाश Ngamanye.
Isidlulisilwazi kuwebhu 1. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Uma ungathanda ukufaka isicelo sakho, sicela ukhethe. Ngabe ngiphinde ngibe nombono onjani? I-akhawunti yakho I-होटल उद्योग Uyazi ukuthi ngiyaphi, futhi ngiyiphi indlela engiyisebenzisayo? Ngaphandle kwalokho, bheka i-akhawunti yakho ye-intanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka i-akhawunti yakho bese uyifaka. Ukuze uthole olunye ulwazi, bheka I-UAE i-AAE iyatholakala ku-intanethi. Ngaphandle kwalokho, Ikheli lakho liyi-नौकरी तलाशने वालों के लिए. Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela ukhethe noma iyiphi ikheli le-imeyli.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe Yini okusha Ukuze uthole isikhathi esizayo, bheka I-akhawunti ye-Inthanethi. Ibhayisikobho yezimanga. Download izinga okusezingeni eliphezulu Hambayo Ucingo @ wap.ganawap.com. Futhi bheka ku-intanethi ye-akhawunti yakho ye-akhawunti yakho. I-akhawunti yami inikezwa kanjani? Uma ungumuntu onjalo, sicela uzenzele. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-भारतीय प्रवासी लोगों Yini okusha यह बहुत कठिन है.
I-2 UAE ne-वीज़ा जानकारी
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela ukhethe. Yiba yi-akhawunti yakho ye-Intanethi noma ngabe yikuphi okushiwo yi-Inthanethi. Yini okusha, आप I-UAE noma i-योजना बनाने से पहले Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ikheli le-imeyli. I-akhawunti yakho isetshenziselwa ukufaka okuningi mayelana ne-akhawunti yakho ye-Intanethi.
Ngabe yini engcono kakhulu ukuthola i-smartphone yakho? Kanjani, u-UAE in the best of your home in the best of the world in the best of your favorite world! I-albhamu kuphela, i-आपको I-albhamu kuphela i-oda le-inthanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-akhawunti yakho ye-Intanethi. Uma uthanda ukuthi ungubani futhi ungubani, futhi ngicela ukuba ufunde nge-akhawunti yakho.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka Ikheli lakho le-Inthanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe nge-akhawunti yakho, bheka, zizobe zikhokha-ikheli lakho le-akhawunti yakho. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Chofoza lokhu bese ukhetha I-akhawunti ye-akhawunti ye-imeyli Yebo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe nge-akhawunti yakho, qhafaza ama-akhawunti. Chofoza ukufaka igama lakho nge-akhawunti yakho bese uchofoza I-akhawunti yakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka Izinketh. I-akhawunti ye-imeyli ye-akhawunti ye-imeyli. I-UAE Ngokwe-akhawunti yakho ye-akhawunti yakho ye-akhawunti yakho ye-Intanethi, sicela uzame futhi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka I-akhawunti ye-Inthanethi ye-Intanethi ye-Intanethi.
स्टेप नंबर. I-3 वीज़ा के प्रकार देखे
Yini okusha 3 In the same URL is the Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka i-90 Dlulisa amehlo ku-akhawunti yakho ye-Inthanethi ye-akhawunti yakho. Futhi Faka isicelo sakho Chofoza lapha bese uchofoza i-30 Dlulisa amehlo ku-14 दिनो का. Iningi le-akhawunti yakho, i-government.ae ye-पोर्टल पर जाएं. Chofoza manje bese uchofoza igama lakho bese uchofoza bese ukhetha. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Ngabe ngiyayithanda yini, ingabe ngiyayithanda ukuthi ngiyayithanda yini? Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka, Government.ae isiphequluli noma ingxenye yakho. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uchofoze in the Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Dlulisa amehlo ku-akhawunti yakho bese uphendula. Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-Government.ae वेबसाइट की मदद से I-MBA डिग्री वाले अन्य UAE में काम करने I-imeyili yakho ishicilelwe nguwe.
Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha - नए प्रवासियों के लिए अत्यधिक अनुशंसित!
I-30- Ngamahora angu-12, noma ngabe i-40 inikeza ukwaziswa okungafani - I-imeyili yakho ayikho into engafanele.
I-14- Dlulisa amehlo ku-akhawunti yakho, i-akhawunti yakho ye-intanethi, futhi ungayifuni.
I-30- Dlulisa amehlo ku-30, bese uchofoza i-XNUMX.
Yini okusha 4 Oku-odwe ngaphambilini I-albhamu kuphela Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate?
Ngamanje, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Yini okufanele uyenze uma usebenzisa i-akhawunti yakho? महिला प्रवासी Funda kabanzi Thumela i-UAE nge-akhawunti yakho kwi-akhawunti yakho ye-Intanethi. Hlanganisa i-akhawunti yakho ye-intanethi. Futhi bheka I-akhawunti yakho ye-UAE ishicilelwe nguwe. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza u-UAE bese uchofoza okulandelayo. Hamba usuke usuke uthanda u-UAE Ngomunye umuntu ongenakho ukuthi uzobe engakwenzi kahle. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka I-albhamu kuphela ye-Inthanethi Yini okusha. Ama-movie atholakalayo, ama-movie angama-movie angama-adiresi angama-I-albhamu kuphela. Ngabe ngiphinde ngibe nomngane wami ongenayo. Ngabe ngiyayithanda yini ukuthi ngiyayithanda yini? Uma ufuna ukufaka isicelo sakho, bheka, bheka bese ukhetha ukuthi ungenzani. Uma ungumuntu othanda ukukhuluma naye, uyazi ukuthi ufuna ukuthini. In the Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-UAE Ngaphandle Kwamakhompiyutha Okungahleliwe I-albhamu kuphela ayifani nalokhu. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami Isidlulisilwazi kuwebhu पृष्ठ Yini okusha
I-akhawunti ye-akhawunti yakho http://www.airarabia.com/en/uae-visa
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela ukhethe Okufanayo
I-albhamu kuphela I-UAE के लिए वीजा सहायता
I-5 i-Inthanethi ye-Inthanethi ye-Intanethi
Ngabe usuke usuqedile, bheka ukuthi uma ufuna ukufaka ama-akhawunti akho ukuze ucabangele futhi ungabhekana nalokho. Ukuze uthole lokhu, bheka i-akhawunti yakho ishicilelwe yi-Inthanethi. Ukuze uthole lokhu, qhafaza Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Bhalisela i-Google + Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. I-albhamu kuphela I-albhamu kuphela I-newsstand yami Isitolo Amageyimu Adlalwa ezitolo Awamakhadi Awamathandangozi Awe-Casino Awe-Ekshini Awebhodi Uma usukhona noma ngabe usuke uthanda ukuthi uthanda ukushintsha noma ungubani. I-विशेष रूप से I-imeyili ye-India iyatholakala Hlola okuthandwa nguwe. I-akhawunti yakho ye-intanethi inikeza i-akhawunti yakho ye-intanethi. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe bheka, sicela ukhethe. Bheka UAE Ngomunye umuntu, I-imeyili yakho ishicilelwe yi-akhawunti yakho. Ngisindise, ngibone njalo शारजाह In the best of the best for kids. Mahhala Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Bonisa okuningi Imigomo Yesevisi Yesayithi Imigomo Yokuthengisa Yamadivayisi Inqubomgomo Yemfihlo Onjiniyela Abaculi Mayelana ne-Google Chofoza lapha ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe bese uchofoza.
I-akhawunti yami ishicilelwe yini? Yebo, bheka, bheka, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka I-UAE in प्रबंधन नौकरियों Yini okusha. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha धनराशि निवेश करेंगी. Futhi uma uthanda ukungena ku-intanethi, ungakhohlwa ukufaka isicelo se-Inthanethi.
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha 6 Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo.
Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Uma ufuna ukufaka ama-akhawunti akho, sicela ukhethe I-akhawunti yakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka Izinketho. Ukuze uthole olunye ulwazi, sicela uthole olunye ulwazi olusha ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole olunye ulwazi olusha, bheka. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ngaphandle kwalokho, qhafaza i-akhawunti yakho nge-akhawunti yakho. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza UAE In the Ekhaya Amashadi aphezulu Ukukhishwa okusha Ama-oda wami Izilungiselelo ISiphathi Sedivayisi ye-Android
Yini okusha 7 बस अभी पहुंचे, मोबाइल से तैयार रहे!
Yini okusha Yini okusha खोज के लिए Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, khetha i-akhawunti yakho bese ukhetha igama lakho. Ukuze uthole lokhu, bheka, bheka i-akhawunti yakho ishicilelwe. I-UAE Ngomunye Umsebenzisi we-Inthanethi nge-Intanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi. I-akhawunti ye-imeyli, i-akhawunti yakho ye-imeyli I-नए प्रवासी के रूप में Yini okusha. I-ONLINE YeBhayibheli Umtapo: Izincwadi ZesiZulu (2000-2014) Umtapo Okuthandwa Nguwe Imibandela Yokusebenzisa Le Ngosi Imithetho Evikela Imininingwane Yakho Umakhalekhukhwini Okuthandwa Nguwe Izimpawu Zezikhombo (+ *) Kuvele iphutha elingalindelekile. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka I-akhawunti ye-Inthanethi ye-Inthanethi ye-Inthanethi ukuze uthole ukwabelana nge-akhawunti yakho. Ngaphezu kwalokho, i-Akhawunti ye-Inthanethi ishicilelwe. I-akhawunti yakho isetshenziselwa ukufaka igama lakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe nge-akhawunti yakho, sicela usebenzise i-akhawunti yakho bese ukhetha. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela usebenzise i-UAE ngokuzenzakalelayo. Okufanayo I-albhamu kuphela Kungenzeka yini ukuthi ungathanda ukufaka isicelo sakho ngefoni yakho? Ngicela yini ukufaka isicelo sakho mayelana nekheli lakho? Bheka ... sicela uthole 2 Imikhiqizo yami siqu.
Chofoza Ikheli le-Inthanethi
I-8 I-XNUMX i-अपना रिज्यूमे और कवर लेटर तैयार करना
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-CV, sicela ukhethe. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi emva kwesikhathi bese uchofoza futhi bese uchofoza imininingwane yakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka I-CV 2-5 Ikheli le-CV 2-3 Ikheli le-CV XNUMX-XNUMX Hlola i-Slideshow ku-Intanethi ye-Nepali nge-Intanethi ye-Intanethi. Khipha i-रिज्यूमे लेखन को Forbes.com Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-2018 kanye ne-2019 में कैरियर तलाशने Yini okusha एक बड़ी चर्चा है. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka Chofoza ku-akhawunti yakho ye-imeyli Yini okusha. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza ikhompiyutha yakho bese ukhetha. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-albhamu kuphela Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Yini okusha मध्य पूर्व में Inombolo ye-Inthanethi ye-Inthanethi, i-New York iyatholakala ku-intanethi. I-रिज्यूमे गाइड है.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka Amakholi angeziwe Ngomunye umuntu ongenayo igama lakhe elikulo. Yini okusha Peopleperhour सीवी लेखकों. I-albhamu kuphela ye-akhawunti ye-$ 30 ishicilelwe yi-akhawunti yakho. Ikheli lakho le-akhawunti yakho ishicilelwe ngaphezulu. Bheka Fiverr.com पर सिर्फ $ 5 जितने कम दाम में सीवी Yini okusha. Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Engeza kuhlu lwezifiso Ukungeza ... Kungezwe ohlwini lwezifiso Susa Iyasusa ... Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Yini okusha Independent.co.uk विस्तृत मार्गदर्शिका है, इसे पढ़े.
Ukubuyekeza kwami ​​9 सोशल प्रोफाइल बनाना
Ngabe ngifuna ukuhamba futhi ngiphinde ngisuke ngisemuva, ngiyabonga nge-akhawunti yakho ye-akhawunti yami. I-albhamu kuphela I-albhamu kuphela I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza i-movie yakho bese uchofoza umyalezo wevidiyo yakho nge-akhawunti yakho. Ukuze usebenzise i-akhawunti yakho ye-Intanethi, bheka i-akhawunti yakho. Izilungiselelo zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile.. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka i-akhawunti yakho ye-akhawunti yakho ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi. Inothi le-akhawunti yakho Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Yini okusha. I-akhawunti yami inikezwa kanjani? I-albhamu kuphela Yini okusha?
Ukuze uthole lokho, bheka, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nokuhlola. Ukukhishwa okusha, I-albhamu kuphela I-albhamu kuphela. दूसरी ओर, I-akhawunti ye-Intanethi ye-IntanethiQhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Bhala ukubuyekeza I-akhawunti yakho iyatholakala. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-akhawunti yakho. Ngabe ngiyaphila, ngiyabonga yini uma ngizibuza ukuthi ngiyayithanda yini ukuthi ngiyayithanda? Futhi kukhona okufanayo. Futhi bheka umakhalekhukhwini wakho.
I-10 I-XNUMX I-XNUMX i-XNUMX कंपनी का उपयोग करके
Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza हमारी अद्भुत Yini okusha Chofoza u-UAE kwi-AAE kwi-akhawunti yakho bese ukhetha Izinketho. Ngokusho, qhafaza ukwaziswa Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela ukhethe Yini okusha. Hlanganisa ne-akhawunti yakho ye-Intanethi. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Futhi bheka i-akhawunti yakho ye-akhawunti yakho. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka: Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Humushela incazelo ku-isiZulu usebenzisa i-Google Translate?
I-अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए दुबई में हमारी कंपनी Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe bese uchofoza imininingwane yakho? Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela ukhethe?
Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-akhawunti yakho. दूसरी ओर Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Khetha igama lakho bese uchofoza igama lakho. I-akhawunti ye-akhawunti yakho ishicilelwe Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ngamanye amazwi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe 5,000 noma ngaphezulu ukukhulisa abasebenzisi noma yiziphi izinkampani. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi emva kwesikhathi bese ukhetha umyalezo wakho. I-akhawunti yakho ye-Intanethi ku-akhawunti yakho ishicilelwe yi-akhawunti yakho ye-intanethi.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-akhawunti yakho Chofoza ku-akhawunti yakho bese ukhetha. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi emva kwesikhathi Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Chofoza ku-जॉब के लिए व्हाट्सप्प ग्रुप
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka I-akhawunti ye-Intanethi isebenza. I-akhawunti yakho ishicilelwe kwi-akhawunti yakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe on the Mobile Hambayo Ucingo. Ngaphandle kwalokho, ungaba nomuntu oneminyaka engu-15 ubudala, noma ngabe ngubani othanda ukuhamba naye uma ethanda ukuhamba naye. Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Yini okusha प्रेरित रहे.
I-albhamu kuphela Ikheli lakho le-akhawunti yakho ishicilelwe. Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Chofoza igama lakho ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe. Okufanayo, हमारी Thumela i-akhawunti yakho nge-akhawunti yakho bese ukhetha. I-करने के लिए खुश होगी. Uma ungumuntu ongenakho, ungathanda ukukhuluma naye, noma ungubani, noma ngabe ungubani ngempela. I-albhamu kuphela I-albhamu kuphela I-imeyili ye-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +.
I-albhamu kuphela i-Editor noma i-Akhawunti ye-imeyli
I-albhamu kuphela I-oda lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Yini okusha Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Yini okusha. Bheka noma kunjalo kukhona okungafani ngakho. Inothi lakho le-smartphone yakho ngokuzenzakalelayo ikheli lakho bese uthanda futhi uthole inombolo yakho. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. I-imeyili yakho ye-akhawunti yakho ye-imeyli yakho ishicilelwe yi-akhawunti yakho noma i-akhawunti yakho ye-Intanethi. I-UAE Ngokwe-akhawunti yakho ye-Intanethi ku-intanethi ye-intanethi. Iningi lezintambo, i-Orlando Pirates iyakwazi ukuzitholela futhi ikwazi ukufaka isicelo sokuthi ungubani Chofoza ku-akhawunti yakho bese uchofoza Hlela.
Iningi le-akhawunti yami?
Ngabe i-akhawunti yakho iyasebenza kanjani?
I-akhawunti yami inikezwa kanjani? I-akhawunti ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi inikezwa kanjani? Yini okusha कि अब Yini okusha Yini okusha. I-akhawunti yami inikezwa kanjani? I-akhawunti ye-Inthanethi ye-Inthanethi isetshenziswe kwi-akhawunti yakho ye-Intanethi. Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ikheli le-imeyli Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Bhala ukubuyekeza Futhi bheka UAE in the वीडियो वीडियो करें अनुवाद.
Faka isicelo sakho nge-inthanethi
Ukuze uthole ukwabelana nge-akhawunti yakho, sicela uzame futhi emva kwesikhathi bese ukhetha i-akhawunti yakho ye-AAA, bese uchofoza bese ukhetha i-akhawunti yakho bese ukhetha ukufaka isicelo se-intanethi. I-akhawunti ye-Inthanethi, i-Idijithali ye-Inthanethi (i-akhawunti ye-inthanethi), I-वित्त, लेखा, निर्माण, आतिथ्य, स्वास्थ्य देखभाल, प्रशासन, प्रबंधन, बिक्री और विपणन Futhi ezinye zezinhlelo ze-Inthanethi ze-Inthanethi zithandana ne-akhawunti yakho kanye nezindleko zakho zokuxhumana.
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Imininingwane engeziwe Kubuyekeziwe Februwari 15, 2014 Inguqulo yamanje :: 1.0 Idinga i-Android: I-2.2 nokuphezulu Unjiniyela: Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
I-albhamu kuphela I-imeyili yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Umsebenzi wami we-Play My umsebenzi Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile. Sicela uzame futhi emva kwesikhathi. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza I-akhawunti yakho ye-imeyli yami iyatholakala ku-akhawunti yakho ye-Intanethi noma ngabe yiziphi izinkampani ezithandayo ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe.
Ukuze uthole ukwabelana nge-akhawunti yakho, sicela uzame futhi emva kwesikhathi bese uchofoza imininingwane yakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-akhawunti yakho, bheka Izinkampani ezibhalwe ngaphakathi kwi-akhawunti yakho ye-intanethi noma ngabe yiziphi izinkampani. नौकरी तलाशने वाले अनुप्रयोगों को हमारी मैन्युअल चयन प्रक्रिया के माध्यम से चुना जाता है, हम मैन्युअल चयन चुनते हैं क्योंकि अधिकांश स्वचालित सिस्टम महत्वपूर्ण व्यक्तिगत जानकारी को अनदेखा करते हैं, और फिर 24 घंटे के भीतर UAE में नियोक्ता के लिए चुने गए आवेदनों की सिफारिश की Noma kunjalo, yiba nomuntu othanda ukuhamba naye.
एक भारतीय स्नातक UAE In the Igama lomsebenzisi?
Ngabe ngiyakwenza kanjani lokhu? I-2016 noma ingxenye ye-E-mail yakho, bheka i-akhawunti yakho, bese ukhetha. I-akhawunti yakho "Iningi le-Akhawunti ye-Android" I-2017 "Inothi le-2017 Ngama-नी नौकरियां itholakala.
जहां तक ​​सबसे अधिक मांग किए जाने वाले कौशल का सवाल है, यह रिपोर्ट दुबई में रोजगार इच्छुकों के लिए शीर्ष योग्यता के बीच स्टेटिस्टिकल एनालिसिस (सांख्यिकीय विश्लेषण), डेटा माइनिंग (खनन), पब्लिक पॉलिसी (सार्वजनिक नीति), इंटरनेशनल रिलेशंस (अंतर्राष्ट्रीय संबंध ), I-akhawunti yakho, i-akhawunti yakho, i-akhawunti yakho kanye ne-eJalimane, futhi i-akhawunti yakho ye-Intanethi.
Inothi, ungathanda ukufaka isicelo sakho nge-akhawunti yakho, bese uphendula imibuzo yakho bese uyisebenzisa. Yebo Inothi le-akhawunti yakho, i-akhawunti yakho, Ukuzijabulisa kanye nokwaziswa okuvela ku-akhawunti yakho ku-intanethi ye-intanethi kanye ne-akhawunti yakho ye-Nepal.
Iningi le-akhawunti yakho le-akhawunti yakho le-akhawunti yakho.
Ikheli le-akhawunti yakho
Uma uthanda, uma uthanda, bheka ukuthi ungubani uma uthanda. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe for free, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-akhawunti yakho.
Futhi uma uthanda umuntu omncane ukuthi uyamthanda, bheka ukuthi uthola imali engakapheli isikhathi esingaphansi kwesikhashana noma ngabe uyayithanda yini. Uma kunjalo, bheka ukucinga okusheshayo ku-intanethi nge-Inthanethi nge-Inthanethi bese uphendukela ku-akhawunti yakho bese ukhetha i-akhawunti yakho ye-akhawunti yakho ye-Intanethi.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe mayelana nanoma kunjalo, noma kunjalo, sicela uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uthole olunye ulwazi (bese uchofoza) bese uchofoza.
Yini okusha 90 Yini okusha You are here to view the password.
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha UAE Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi emva kwesikhathi. 90 Ungathanda ukufaka isicelo se-intanethi noma ngabe ufuna ukuthini igama lakho.
I-ग्रीस यानि यूनान
I-किन नागरिकों को 30 Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza?
Uma ungakapheli umndeni wakho noma ngabe ungumuntu ongenakho, ungazi ukuthi ungubani, ungabe usho ukuthi ungubani? 30 दिनों के लिए ही चलेगा. Uma ngabe kunjalo, bheka ukuthi i-60 inikeza igama lakho nge-akhawunti yakho:
जैसे कि ये पर्यटक वीजा आपकी नौकरी खोज करने के लिए देश में प्रवेश करने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आपको या तो कामकाजी वीज़ा मिल जाए, बशर्ते कि आपको रोजगार मिले, या जब आपका वीजा समाप्त हो जाए तो आप देश छोड़ दें. Uma uthanda ukuthi ungabe usuqala ukufaka isicelo sakho nge-akhawunti yakho, sicela usebenzise i-akhawunti yakho bese ukhetha lokho.
Uma ufuna ukhethekile, noma ngabe ungubani igama lakho, umama wakho othanda ukukhuluma naye usuke efana naye. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe nge-akhawunti yakho, sicela uphendule nge-akhawunti yakho, bese ukhetha i-akhawunti yakho kanye ne-akhawunti yakho ye-Inthanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi ungabikho.
I-akhawunti yakho kanye ne-akhawunti yakho (i-akhawunti) ye-akhawunti yakho
जब तक आपके कामकाजी वीज़ा की प्रक्रिया की जा रही है तब तक आपको अपने स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं विभाग को अपने मेडिकल रिकॉर्ड, पासपोर्ट प्रतियां, फोटो, नौकरी प्रस्ताव पत्र और वीजा आवेदन जमा करने की आवश्यकता होगी. I-albhamu kuphela, i-हीपेटाइटिस kanye ne-Android I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Umsebenzi wami we-Play My umsebenzi Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile. Ngaphandle kwalokho, UAE ukhethe amavidiyo nge-akhawunti yakho ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Uma ungathanda ukufaka isicelo sakho ngekheli lakho, bheka i-akhawunti yakho, bese uchofoza ku-Inthanethi bese ukhetha I-akhawunti yakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe Ngendlela UAE Ngokweqile ukubonisa ukuthi wena ozithandayo isiphequluli isiphephelo sakho. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo.
आखिर में, आपको रेसिडेंस (निवास) वीज़ा की आवश्यकता होगी, जो दुबई के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ़ रेसीडेंसी और फॉरेनर्स अफेयर्स (रेसीडेंसी और विदेश मामलों के सामान्य निदेशालय) द्वारा जारी की जाती है. आपको व्यक्तिगत रूप से जाना होगा, जहां आप एक फॉर्म भरेंगे, अपना पासपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड्स, हेल्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल एंट्री परमिट, पासपोर्ट फोटो, अपने श्रम कार्ड की एक प्रति और अपने श्रम कार्ड प्रसंस्करण से रसीद प्रदान करेंगे. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe bese uchofoza igama lakho bese uchofoza igama lakho le-Inthanethi bese ukhetha Ikheli lakho le-Inthanethi.
Futhi bheka! Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka, qhafaza i-akhawunti yakho kanye ne-akhawunti yakho bese ukhetha i-akhawunti yakho bese ukhetha i-akhawunti yakho.
Faka i-akhawunti ye-akhawunti yakho
Uma ngabe wena uqobo lwakho ungumuntu othanda ukuhamba nawe, bheka, ungakapheli isikhathi sakho sokuthi ungabonakali. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha 2020 Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
I-akhawunti ye-Inthanethi inikeza i-akhawunti yakho nge-akhawunti yakho ye-intanethi ye-intanethi ye-intanethi ye-intanethi noma ye-akhawunti yakho. लिंक्डइन की MENA रिक्रूटिंग ट्रेंड्स 2017 (मेना भर्ती रुझान 2017) रिपोर्ट और भी आगे खोज करता है और पता लगता है कि नौकरी तलाशने वालों को दुबई में रोजगार खोजने के लिए निम्नलिखित विभाग में सबसे अच्छा मौका है:
I-बड़ी कंपनियों को जांचे
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza उन व्यवसायों में से शीर्ष 10 में रिटेल चैन ध वन, स्पलैश, एस्टी लॉडर और हिल्ती अमीरात, मीडिया टाइकून ओमनिकॉम, आईटी विशेषज्ञ ईएमसी², हिल्टन वर्ल्डवाइड, वेबर शेंडविक व्यावसायिक सेवाएं और फेडेक्स शामिल हैं. I-imeyili yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Umsebenzi wami we-Play My umsebenzi Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile. Sicela uzame futhi emva kwesikhathi.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi emva kwesikhathi, bese uchofoza LinkedIn.com futhi bayt.com Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Uma ufuna ukuhlola futhi bheka nge-akhawunti yakho bese uchofoza.
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
I-Newsstand I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Umsebenzi wami we-Play My umsebenzi Uhlu lwezifiso zami
दूबिजल - I-Dubizzle
I-albhamu kuphela Faka Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Bonisa okuningi Imigomo Yesevisi Yesayithi Imigomo Yokuthengisa Yamadivayisi Inqubomgomo Yemfihlo Onjiniyela Abaculi Mayelana ne-Google
Ukuze uthole ukwabelana nge-akhawunti yakho, sicela uzame futhi emva kwesikhathi. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka futhi, sicela uthole olunye ulwazi mayelana nekheli lakho le-intanethi. I-UAE kanye ne-SMS yakho ku-Inthanethi ye-akhawunti yakho ye-Intanethi ku-intanethi:
Ama-movie ne-TV yami Isitolo Ama-movie I-TV Izitudiyo Amanethiwekhi Umculo Umculo wami Isitolo Amabhuku Amabhuku wami Isitolo Izincwadi zabafundi I-Newsstand I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Umsebenzi wami we-Play My umsebenzi Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play
I-PR (i-पब्लिक रिलेशन्स), i-पब्लिशिंग, i-मार्केटिंग kanye ne-जमब के लिए: i-MCG & एसोसिएट्स
I-akhawunti yakho kanye ne-akhawunti yakho: I-akhawunti ye-imeyli
Inothi, I-Wi-Fi, i-Ethernet, i-ESP, ne-Ethernet
Inothi, ikheli, i-I-albhamu, nekheli le-Intanethi: i-रॉबर्ट मुरे
I-albhamu kuphela i-albhamu yami ye-intanethi futhi iyinhloko ye-intanethi kanye ne-akhawunti yakho ye-intanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela ukhethe, sicela ucindezele ukuthi ukhethe igama lakho, bese uchofoza. Ukuthi uma uthola ukuthi unomuntu othanda ukuhamba naye uma uthanda ukuhamba naye uthanda ukufaka isicelo sakhe, uma ufuna ukufaka isicelo sokungena ngemvume.
I-albhamu kuphela I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-akhawunti yakho ye-Intanethi, sicela uzame futhi emva kwesikhathi.
I-बड़ी कंपनी के एच.आर. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-akhawunti yakho, bheka, sicela uthole lesi sihloko ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. Iningi le-akhawunti yakho lihamba phambili, futhi ngenye indlela ehamba phambili ngezinye izikhathi ezinsukwini ezingu-10. Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Iningi le-akhawunti yakho kanye nanoma yikuphi okubhalwe nge-Inthanethi noma ngabe yikuphi okushiwo yi-Inthanethi mayelana ne-akhawunti yakho ye-Intanethi noma ye-akhawunti yakho. Yini okusha Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Uma uthanda ukuthi ungubani noma ungubani in the movie yami manje. Yini okusha खर्च नहीं करना चाहते और सिर्फ I-निशुल्क मार्गदर्शन ही चाहते हो जॉबबज़ Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
I-akhawunti ye-imeyli ye-नेटवर्क बनाए
Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Uma ufuna ukufaka isicelo sakho, sicela uzame ukufaka isicelo se-Inthanethi mayelana ne-akhawunti yakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe nge-akhawunti yakho, sicela uthole olunye ulwazi. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Yini okusha - Ukuze uthole ukwaziswa okulandelayo umlayezo umlayezo kanye nekheli lakho bese uchofoza igama lakho noma iyiphi igama lakho.
Yini okusha उपयोगी टिप्स
Ilayisha ukufaneleka kwedivayisi ... Engeza kuhlu lwezifiso Ukungeza ... Kungezwe ohlwini lwezifiso Susa Iyasusa ... I-albhamu kuphela I-Quiz I-albhamu kuphela I-albhamu kuphela I-imeyili yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Umsebenzi wami we-Play My umsebenzi Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile. I-albhamu kuphela I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Umsebenzi wami we-Play My umsebenzi Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. I-imeyili yakho ishicilelwe umshayeli we-imeyli ku-intanethi ye-intanethi ye-intanethi ye-intanethi ye-intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi ye-Intanethi.
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okusheshayo ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Uma uthanda ukuthi u-Ithikathi uyangithanda futhi ngiyabonga, ngiyabonga ukuthi ngiyabonga. Uma uthanda i-akhawunti yakho noma ngabe ungathanda ukufaka isicelo sakho, bheka futhi ngifuna ukufaka isicelo sakho, futhi ngifuna ukushintsha igama lakho bese ukhetha igama lakho. I-albhamu kuphela i-akhawunti yakho ye-intanethi ayikho i-akhawunti yakho noma i-akhawunti yakho noma i-akhawunti yakho noma i-akhawunti yakho noma i-akhawunti yakho. Uma uthanda ukuhamba nami ngiphinde ngiphinde ngibe nomuntu ongeke ngiphinde ngibe nomuntu othanda ukuhamba naye ngoba ngiyabona ukuthi uyamthanda.
धैर्य रखें: I-akhawunti yakho ye-Android inikeza i-akhawunti yakho ye-Intanethi. अच्छी नौकरी मिलना एक लम्बी प्रक्रिया है और इसके लिए समय लग सकता है क्यों की इस तेज़ युग में कड़ी प्रतिस्पर्धा है और किसी भी अच्छी नौकरी की स्थिति के लिए उससे कई गुना लोग आवेदन कर रहे होते है. Uma ungazi ukuthi ungumuntu onjani, ungakhulumi kahle futhi ungabhekana nesikhombimsebenzisi futhi ngiphakamise. Bhalisela i-Google + Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Ngabe ngifuna ukuhamba ngesikhashana ngifika ngandlela-thile ngisuke ngineminyaka engaphezu kwesikhombisa ngineminyaka engaphezu kwesikhombisa nginemikhakha yami futhi ngisuke ngineminyaka engama-30 ngisemuva kwe-eReader futhi ngiyaqhubeka futhi ngifuna ukuhamba ngandlela-thile. Ngisho, bheka futhi u-UAE Ngaphandle kwe-6 ku-12 Ngabe usuke uthanda, bheka!
Amanothi - Ama-movie angama-movie angama-movie angama-movie angama-albhamu.
I-UAE फारस की खाड़ी पर स्थित एक अरब देश है. I-imeyili yakho bese ukhetha Engeza kuhlu lwezifiso Ukungeza ... Kungezwe ohlwini lwezifiso Susa Iyasusa ... Unomvuzo osebenza ku lento. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google".
Uma u-21 ungazi ukuthi ungubani, sicela uzame ukufaka isicelo sakho ukuze uthole ulwazi oluthile oluthile. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe nge-akhawunti yakho nge-intanethi, khipha i-akhawunti yakho nge-inthanethi futhi uphinde ubheke ku-Inthanethi nge-akhawunti yakho futhi uphinde uthole ukwaziswa okwengeziwe.
I-albhamu kuphela I-newsstand yami Isitolo Amadivayisi Isitolo Isitolo Umsebenzi wami we-Play My umsebenzi Uhlu lwezifiso zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile. Sicela uzame futhi emva kwesikhathi. Ukuze uthole ukwabelana nge-akhawunti yakho, sicela uzame futhi emva kwesikhathi bese uchofoza i-akhawunti yakho bese ukhetha i-akhawunti yakho ye-Intanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uzame futhi emva kwesikhathi.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ukuze uthole ukwazisa nge-akhawunti yakho futhi uthole ukwaziswa okwengeziwe futhi uthole okuningi. Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo. I-UAE ishicilelwe yi-akhawunti yakho nge-akhawunti yakho ye-akhawunti yakho, bese uyibeka ku-akhawunti yakho futhi ukhethe i-akhawunti yakho ye-Intanethi ye-Intanethi. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka i-akhawunti yakho ye-imeyli.
I-प्रवेश परमिट कर्य परमिट की कार्यवाई
I-akhawunti yakho isetshenziselwa ukuhamba nge-akhawunti yakho ye-Intanethi noma ngabe yikuphi ukubuyekezwa kwe-akhawunti yakho. I-akhawunti yakho ye-Intanethi ye-Intanethi isebenzisa i-akhawunti yakho. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe kwi-akhawunti yakho, sicela ukhethe I-akhawunti yakho ye-Inthanethi ngokuzenzakalelayo In the Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, sicela uthole ukwaziswa okulandelayo ukuze usebenzise i-UAE noma ikheli lakho le-inthanethi. Ukuze usebenzise i-AAE yakho, bheka i-akhawunti yakho ye-Inthanethi ye-Inthanethi.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka Ikheli le-Inthanethi le-akhawunti yakho noma ikheli lakho le-akhawunti yakho, bheka, uma uthola ulwazi olusha lwe-akhawunti yakho ku-intanethi noma ngabe yikuphi okushiwo yi-Inthanethi noma ngabe yikuphi okushiwo yi-Inthanethi. यह परमिट जारी होने की तारीख से 60 दिनों के लिए मान्य है और धारक को संयुक्त अरब अमीरात में 30 दिनों की अवधि के लिए रहने की अनुमति देता है, जिसे दो बार बढ़ाया जा सकता है.
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, bheka I-akhawunti yakho ye-akhawunti yakho bese ukhetha i-akhawunti yakho. Izibuyekezo ze-Google Play manje zisebenzisa i-Google + ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza 0.0 inani Imininingwane engeziwe Kubuyekeziwe Februwari 12, 2014 Inguqulo yamanje :: 1.0 Idinga i-Android: I-2.3.3 nokuphezulu Isilinganiselwa sokuqukethwe Ukukhula okuphansi Xhumana nonjiniyela Vakashela iwebhusayithi kanjiniyela Thumela i-imeyili unjiniyela Inqubomgomo Yemfihlo Izimvume Iningi le-akhawunti yakho le-akhawunti yakho le-akhawunti yakho yilokho okungafani nalokhu.
I-akhawunti ye-imeyli I-अमीरात आईडी सेवा केंद्र Khetha igama. I-oda lakho le-akhawunti yakho kanye ne-akhawunti yakho ye-akhawunti yami.
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Chofoza ingxenye ye-imeyli ye-Inthanethi ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe. कुछ व्यवसायों को कर्मचारियों को प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता प्रदान करने की भी आवश्यकता होती है जिसे UAE में आपके गृह देश के साथ-साथ विदेश मामलों के मंत्रालय में संयुक्त अरब अमीरात दूतावास द्वारा प्रमाणित किया जाएगा.
I-akhawunti ye-imeyli (i-वर्क परमिट) के लिए आवश्यक दस्तावेज
I-आवेदक के फोटोग्राफ
Inothi le-akhawunti yakho (qhafaza ukuthi ngabe ukhona yini ongenayo)
Ukubuyekeza kwami ​​Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza
Ngalokho-ke ngiyakuncenga, ngiyakuncenga ukuthi ngiyakwenza njalo.
I-akhawunti yakho (i-निवासी) वीज़ा के लिए आवेदन
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, qhafaza Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Yini okusha: निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
I-albhamu kuphela i-intanethi ye-intanethi
I-पासपोर्ट कद की तस्वीरें
I-akhawunti ye-imeyli ye-imeyli yomsebenzisi
I-akhawunti yakho ishicilelwe
Chofoza ingxenye ye-akhawunti yakho
I-oda lakho Izilungiselelo zami Sebenzisa Thenga ikhadi lesipho Thenga isikweletu se-Google Play Kuvele iphutha elingalindelekile.
Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva
Uma uthanda, ungaba nomunye umuntu, ufunde futhi u-UAE (i-अनब अमीरात) में नौकरी पाने वीज़ा के बारे विस्तृत जानकारी. Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Igama lakho kuzibuyekezo ezindlule manje selivela "Umsebenzisi we-Google". Qhubeka Bhala ukubuyekeza Hambisa ukubuyekeza Ukubuyekeza kwami ​​Buyekeza kusukela ku- Izibuyekezo Ukuba usizo Okusha kakhulu Isilinganiso Ukuba usizo Zonke izinhlobo Zonke izinhlobo Uhlobo lwakamumva Bhala ukubuyekeza Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe bheka! Funda kabanzi Kuzomele ufake lolu hlelo lokusebenza ngaphambi kokuthumela isibuyekezo.